Windows ကို 10 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖယ်ရှားရာမှာ Microsoft ရဲ့ Surface က Laptop ကို | ယင်း
3 မေ 2017
Windows ကို 10 S ကိုဖယ်ရှားရာမှာ Microsoft ရဲ့ Surface က Laptop ကို: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည်, စျေးနှင့်အင်္ဂါရပ်
Microsoft က Surface က Laptop ကို ဤနေရာတွင်ဖြစ်တယ်, ဒီတစ်ခုပြေး Windows ကို 10 အက်စ် Microsoft က New York မှာယင်း၏ Microsoft ကပညာရေးအခါသမယမနေ့ကမှာက Windows 10 S နဲ့အသစ်က Surface က Laptop ကိုကြေညာလျက်, ထုတ်ကုန်၏ပွိုငျဘအရည်အသွေးကိုစိန်ခေါ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် Google က Chromebooks သည် နှင့် Apple’s MacBooks အမေရိကန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
The Surface Laptop however is asamatter of fact pricier, and as Microsoft’s Corporate Vice President for Surface Computing Panos Panay made it clear during the introduction, this device is taking on the Apple MacBooks. Microsoft says the Surface Laptop is thinner and lighter than any MacBook in the market, and it is speedier than the current MacBook Air.
Presently the Surface Laptop additionally runs Windows 10 S, which stacks significantly speedier than the standard Windows 10, and can just run applications from the Windows Store. With Windows 1O S you can just run the applications that Microsoft has confirmed. In the event that you need to run something from outside of the store, youXCHARXll need to move up to Windows 10 Pro and the organization will give clients the choice. Do take note of, the Windows 10 Pro overhaul is just till December 31, 2017. The Surface Laptop additionally accompanies one year of Office 365 Personal free.
အဆိုအရ Microsoft က, the applications guarantee “Microsoft-confirmed security and integrity.” This additionally implies you can’t download and install Chrome or Firefox on these laptops, and Microsoft Edge is the default program.
Windows 10 S is integrated with the organizationXCHARXs distributed storage arrangement, which is OneDrive thus every one of your records will be spared to the cloud and open from different devices.
ဒီတော့များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ Surface က Laptop ကို? What’s the starting cost for these devices?
Microsoft က Surface က Laptop ကို $ 999 မှာစတင်နှငျ့သငျဒီကိရိယာကိုများအတွက်လိုအပ် Setup ၏ကြင်နာပေါ် မူတည်. $ 2199 မှအကွာအဝေးတက်ပါလိမ့်မယ်။
The Intel Core i5 form with 128GB SSD stockpiling and 4GB RAM alongside Intel HD Graphics 620 will cost $999. This fundamental model will just come in the shading Platinum, according to MicrosoftXCHARXs site. Intel Core i5 with 256GB SSD and 8GB RAM alongside Intel HD Graphics 620 will cost $1299 and will come in each of the four shading alternatives which are Burgundy, Platinum, Cobalt Blue, Graphite Gold.
Surface က Laptop ကို ထိုနည်းတူအဆိုပါဓလေ့ထုံးတမ်းကို Windows 10 ထက်သီးနှံများကိုပုံမှသိသိသာသာမြန် stacks နှင့်ရုံကို Windows Store မှ application များကို run နိုင်သည့်အတွက် Windows 10 S ကိုပြေး။
Intel ရဲ့ Iris က7သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်အတူ Intel Core i640 နယ်မြေဟာ 1599GB SSD ကို + 256GB RAM ကိုလိုက်လျောညီထွေများအတွက် $ 8 မှာကစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတဦးတည်းရုံရိပ်ပလက်တီနမ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ် $ 1,599 အတွက်လာပါတယ်။ အရိပ်ထဲတွင်ပလက်တီနမ် $ 16 ကုန်ကျမည်ထိုနည်းတူသုံးစွဲနိုင်သော 512GB RAM ကို + 2,199GB SSD ကိုတစ်အုပ်ဖြစ်။
13.5 2256 PPI ထွက်အလုပ်လုပ်တယ်ရာ 1504 pixels ကိုပြဌာန်းခွင့်, x နှင့်အတူလက်ရှိတွင်အဆိုပါ Surface က Laptop ကိုတစ်ဦး 201 လက်မအရွယ် PixelSense Display ကို dons ။ အဆိုပါပြပွဲ 10 အမှတ် Multi-touch နဲ့မရင်းနှင့်3ရှိပါတယ်:2ထောင့်အချိုးအစားနှင့် Surface ကကလောင်လည်းဒီအချိန်ဝေး chip ပါလိမ့်မယ်။
Intel ရဲ့ Iris ကကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အတူ Intel Core i7 နယ်မြေဟာ 1599GB SSD ကို + 256GB RAM ကိုမူကွဲများအတွက် $ 8 မှာကစတင်ခဲ့သည်။
ဒီ Surface က Laptop ကိုများအတွက်တိုင်းတာ 308.1 မီလီမီတာ 223.27 မီလီမီတာ 14.48 မီလီမီတာ x x နှင့် 1.252 ဂရမ်အလေးချိန်ရှိပါသည်။ ဒါဟာတစ်က USB 3.0 ဆိပ်ကမ်းနားကြပ်ပေါက်, Mini ကို DisplayPort ရှိပါတယ် Connect ကို port ကို Surface နှင့်လည်း Surface က Dial နှင့် Surface ကအထိုင်နှင့်အတူကောင်းလှ၏။ Microsoft ကလက်ပ်တော့နှင့်အတူဘက်ထရီဖြစ်တည်မှု၏ 14.5 နာရီကတိပေးထားပါသည်။
အဆိုပါ Surface က Laptop ကို Windows ကိုမင်္ဂလာပါအတူမျက်နှာ sign-in ကင်မရာ, 720p HD ကိုကင်မရာ (ရှေ့-Face)
စတီရီယိုမိုက်ခရိုဖုန်း။ ဒါဟာ Dolby အသံပရီမီယံနှင့်အတူ Omnisonic ပီရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Wi-Fi မျက်နှာစာတွင်ပြုလုပ် 802.11ac Wi-Fi ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ရှိပါတယ်; ကို IEEE 802.11a /b/ g / n ကောင်းသောကြောင့်ဒါ့အပြင် Bluetooth ကို 4.0 LE မရင်း။
အဆိုပါ လက်တော့ပ် အခု US မှာ Pre-စီစဉ်များနှင့်ဇွန်လ 15, 2017 ကနေတင်ပို့စတင်မည်တက်သည်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦး SharePoint အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက် Next ကိုအဆင့်: စီမံခန့်ခွဲမှု & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
MCSA certified ရရှိထားပြီး Professional က - အင်တာဗျူးမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ